"Direct नेपाल आइडल छिराईदिन्छु "भनेर प्रस्ताव आएको थियो ! - Sajha Entertainment
Home/अन्य no use/“Direct नेपाल आइडल छिराईदिन्छु “भनेर प्रस्ताव आएको थियो !
“Direct नेपाल आइडल छिराईदिन्छु “भनेर प्रस्ताव आएको थियो !
Sajha Entertainment Send an email २८ असार २०७४, बुधबार १४:३९
निकै नै चर्चाको बिषय बनेको रियालिटी सो “नेपाल आइडल” बाट निकै नै अपेक्षा गरिएका प्रताप लामा टप १८ बाटै बाहिरिएका छन् । आइडलमा जानु अघि नै प्रताप दर्शकहरु माझ नेपाली ताराको तेस्रो संसकरणको विजेता भएको कारणले चर्चित थिए । पहिल्यै चर्चा बटुलिसकेका उनलाई फेरी अर्को कार्यक्रममा नाम र दामको लोभमा मात्र गए भन्ने आरोप पनि लगाईयो । तर उनको अनुसार उनी साङ्गीतिक अनुभव को लागी मात्र गएका थिए । त्यसै गरी आईडलका अन्य प्रतिश्पर्धी भन्दा राम्रो फ्यान फलोइङ्र हेको लामा आउट हुँदा उनलाई चाहनेहरु दुखी अनी आक्रोशीत भएका छन् ।
प्रताप लामा नेपाल अाइडलबाट बाहिरिए पछी साझा ईन्टरटेन्मेन्ट लाई दिएको अन्तरवार्ता
भोटको संख्या नभनिकनै अनी प्रतिश्पर्धीहरुको स्थान पनि नखुलाईनुको कारण कार्यक्रममा धाँदली भएको आरोप लगाईएको छ । तर यता प्रताप भने कार्यक्रमको नियमलाई मानेरै अघी बढ्नु पर्ने भएकाले आफ्न यस निर्णयले श्रोताहरुलाई नआतीन आग्रह गरेका छन् साथै आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा अघी बढीरहने बताएका छन् ।
Bishal Suwal Cover Song "Saili"